Fanatanjahan-tena sa vy? Ion-X sa Safira? | Vaovao IPhone
Ny safidin'ny maodely Apple Watch izay te-hividy dia misy fiantraikany amin'ny antony samihafa. Ilay toe-karena, ny endrika, ny tadiny tiana hapetraka eo aminy, sns. Iray amin'ireo fahasamihafana ifotony sy fitsikerana indrindra rehefa misafidy ny maodely fanatanjahan-tena sy ny maodely vy (raha manadino ny toe-karena isika) dia ny vera an'ny efijery Apple Watch. Ny maodely fanatanjahan-tena dia manana kristaly Ion-X, raha ny maodely vy kosa dia misy kristaly safira. Raha heverina fa ny faharoa dia tsara kokoa noho ny voalohany, izany no antony ampidirana azy ao amin'ireo maodely 'Premium', fa tsy resaka hisafidianana ny mainty sy ny fotsy, ary betsaka ny milaza momba ireo lantana roa ireo, ny fandoavana bebe kokoa dia mety tsy hidika ho afa-po bebe kokoa.
1 Ny kalitaon'ny sary avo kokoa amin'ny maodely Sport noho ny amin'ny vy
2 Fanoherana sa sary?
Ny kalitaon'ny sary avo kokoa amin'ny maodely Sport noho ny amin'ny vy
Araka ny nolazain'ny manam-pahaizana ao amin'ny DisplayMate ao amin'ny tatitra nataony momba ny efijery Apple Watch, "Apple dia nahavita tsara tamin'ny alàlan'ny efijery OLED an'ny Apple Watch". Io no fitaovana voalohany ampiasain'ny orinasa amin'ity fampirantiana ity, ary mahatalanjona ny kalitaon'ny sary, toy ny fahamarinan'ireo loko. Na dia tsy nilaza na inona na inona ofisialy momba izany i Apple, dia tombanan'izy ireo fa ny hakitroky ny piksely dia manodidina ny 326 ppi, endrika iray mitovy amin'ny an'ny iPhone 6 sy 6 Plus, noho izany dia fampisehoana Retina tena izy. Na eo aza ireo teny tsara avy amin'ny DisplayMate ireo dia misy teboka ratsy roa izay misongadina fa tokony hamboarin'i Apple ho an'ny taranaka ho avy.
Amin'ny lafiny iray, ny fihenan'ny famirapiratry ny efijery izay ataon'i Apple amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny hazavana be dia be ary mahatonga azy tsy hiseho tsara, zavatra iray izay azo vahana amin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy, saingy mety hisy fiantraikany izany ny bateria. Fa ny tsy manana vahaolana dia ny kristaly safira amin'ny maodely vy sy ny "Edisiona" dia tsy mandeha tsara tahaka ny Ion-X amin'ireo tontolo iainana ireo. Ary ny kristaly safira dia mahazaka tokoa, fa ho setrin'izany dia manome taratra bebe kokoa noho ilay maodely mora vidy kokoa izy, Ion-X. Raha ny tena manokana, ny kristaly an'ny maodely Sport (Ion-X) dia tsy mitaratra afa-tsy 4,6% amin'ny hazavana amin'ny fitsapana natao, fa ny kristaly safira amin'ireo maodely lafo vidy kosa dia 8,2% ihany no hita taratra. Mba hanomezana hevitra anao, ny vera an'ny iPhone 6 sy 6 Plus dia vita amin'ny fitaovana mitovy amin'ilay Apple Watch Sport, Ion-X.
Fanoherana sa sary?
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misafidy ny iray sy ny iray isika. Vera mahatohitra kokoa nefa manana fitondran-tena ratsy kokoa amin'ny toerana misy jiro be? Tsy fanapahan-kevitra mora izany, satria tsy ny kristaly safira no mahatonga ny kalitaon'ny sary tsy dia tsara, na koa ny kristaly Ion-X manimba kely indrindra. Samy mahay mandanjalanja tsara amin'ny lafiny roa (fanoherana sy kalitaon'ny sary) fa ny tsirairay kosa dia manana ny teboka matanjaka ao aminy. Iza no hisafidy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fanatanjahan-tena sa vy? Ion-X sa Safira?
Andrios, interface Android miaraka amin'ny traikefa iOS